Google dia manavao ny interface Wear OS miaraka amin'ny Cards | Androidsis
Eder Ferreno | | SmartWatch, Android Version
Wear OS no rafitra fiasa nohavaozina ho an'ny smartwatches, izay natombok'i Google tamin'ny taon-dasa. Hatreto dia miadana ny fandrosoany eo amin'ny tsena. Raha ny Etazonia, zara raha misolo tena ny 10% amin'ny tsena izy ireo. Saingy manohy miasa amin'ny fanatsarana ity rafitra fiasa ity ny orinasa. Ankehitriny, fampidirana vaovao no ampidirina ao. Efa akaiky izao fanovana lehibe faharoa izay tonga ao anatin'ny herintaona mahery.
Amin'ity indray mitoraka ity, mahita interface miaraka amin'ny Tiles na karatra izahay. Ny tanjony dia ny hanamora ny fampiasana ny Wear OS ho an'ny mpanjifa. Ankoatr'izay, ny fihetsika fitetezana dia manan-danja ihany koa amin'ity tranga ity.
Ny fampidirana ireo taila na karatra ireo dia saraho tsara kokoa ny ampahany amin'ny interface izay mampiseho fampahalalana samihafa amintsika. Noho izany, amin'ny fihetsika dia afaka mivezivezy eo anelanelan'ireto karatra ireto amin'ny Wear OS izahay. Mba hahafahanao mihetsika dia mila manakorisa ny efijery fotsiny ianao amin'ny fihetsika amam-baravarana. Google dia manolotra karatra enina totaliny.
Amin'izao fotoana izao, ireo karatra enina hitantsika dia: Tanjona, Hetsika manaraka, Fotoana, ratram-po, lohateny ary famantaranandro. Toa tsy ho azo namboarina izy ireo, farafaharatsiny amin'izao fotoana izao. Ka ireo no fizarana vaovao azon'ny mpampiasa jerena amin'ny famantaranandrony.
Na dia hanome fampahalalana bebe kokoa momba an'ity famolavolana Wear OS vaovao ity Google ao amin'ny Google I / O 2019, izany dia hanomboka amin'ny herinandro ambony. Tamin'ny nanombohana ity interface ity, voalaza fa hatao amin'ny volana ambony io. Noho izany, amin'ny volana Jona ity famolavolana ity dia havoaka manerantany amin'ny famataranandro.
Fiovana mitady hampiroborobo ny Wear OS eny an-tsena. Ho hitantsika raha zavatra raisin'ny mpampiasa amin'ny fomba tsara izany. Izahay dia hanara-maso hatrany ny hetsika ao amin'ny Google I / O 2019, satria misy vaovao misimisy momba ny rafitra fiasan'ny famantaranandro azo ambara. Ahoana ny hevitrao momba ireo fanovana ireo eo amin'ny interface-ny?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Google dia manavao ny interface Wear OS